Chekwaa Eddy ọchị bụ ihe ijuanya na obere ọpụrụiche | Gam akporosis
Zọpụta Eddy ọchị bụ ihe ọhụrụ dị egwu dị egwu, ma ọ bụ ihe efu na ọnọdụ omimi nke a na-agwa gị ka ị gbalịa ịghọta ya ma chọpụta usoro ya. Ka anyị kwuo na anyị na-ejikwa usoro nko na-anakọta ihe dị iche iche na ndọta ya.
Ese Enwere ike imezi magnet na-abawanye gị ikike na-eme ka ọ dịkwuo mfe rụchaa 120 etoju na egwuregwu a na-akpọ Save Eddy Smile. Anyị ga-eme ya na egwuregwu nke anyị ga-elekwasị anya iji chọpụta omume ndị a ga-eme ma mechaa ọkwa ndị ahụ.
1 Iche bụ
2 Jiri magnet na ihu ọma gị na Save Eddy Smile
3 Ihe mgbagwoju anya
Ihe izizi nke puru iche na Save Eddy Smile bu kedu ka ọ ga-esi dị egwu. A na-akpọ egwuregwu ahụ n'asụsụ Spanish dị ka ọchị ọchị Eddy ma anyị wee nọrọ ya ebe ahụ kpọchiri ya na cell mgbe anyị ji mkpịsị aka anyị ejiri magnet ahụ.
Site na ọkwa mbụ na nkuzi anyị ga-enwe ike ịchọpụta ihe anyị ga-eme. N'ezie, anyị nwere omume dị iche iche iji mezue ọkwa ahụ site na ịga ozugbo ịchekwa Eddy, ma ọ bụ naanị ịnwa ịmechaa ihe niile iji nweta mkpụrụ ego ọla edo.
Na a pịa na ihuenyo anyị nwere ike ịmalite nko ahụ ya na magnet iji "jide" ihe ndị ahụ anyị ga - arịgo elu ma si otu ahụ mezue ebumnuche ụfọdụ.
Jiri magnet na ihu ọma gị na Save Eddy Smile
Na anyị nwere ike mee ka magnet si dịkwuo ike, ọsọ, magnetism na ibu, ọ na-emeworị ka o doo anyị anya nke ọma na onye anyị ga-ejizi aka. Ma ọ bụ na ngụkọta anyị ga-enwe usoro nke 60 ndọta kpọghee na a ubé iju ukporo egwuregwu.
120 ọkwa na-eche ka anyị nwee ike mezue ha ya na ihe ejiri aka mee. Nke ahụ bụ, a naghị emepụta ha aghara aghara, mana mmewere ọ bụla dị na ya nwere ihe ọ pụtara na ebumnuche ya.
Tupu anyị azọpụta Eddy anyị ga-enwe nhọrọ iji were mkpụrụ ego ma ọ bụ gbanye bọmbụ ma ọ bụ kpọghee veranda, n'ihi ya, anyị na-adụ gị ọdụ ka ị attaa ntị nke ọma na ọkwa mbụ nke ekele maka ndụmọdụ anyị ga-enwe ike ịghọta igwe ọrụ ahụ ntakịrị.
Nke a bụ Save Eddy Smile, a M na-egwu dị nnọọ iche na ndị ọzọ ma eleghi anya nka n worksmegide ya. Ọ bụrụ na n'elu nke a anyị enweghị ike ịghọta ọkwa nke mbụ, anyị ga-agabiga na ya obere oge, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na anyị enweta isi okwu, anyị ga-anwa ịmechaa ihe ịma aka 120 ndị a.
Anya na-eso usoro izugbe maka me ka ikuku dị egwu na Eddy ahụ, ihe ndị ahụ, bọmbụ ndị ahụ ma ọ bụ nyiwe ndị ahụ yiri nke ahụ na-adọta ndọta na ike ya. Egwuregwu nke n'onwe ya bụ nnwale nke ya na nke na-echetara anyị n'oge ụfọdụ Ike ọchịchị 3K maka nke ụkọ. Eziokwu na bụ na obere njirimara nke ọtụtụ, anyị nwere ekele na enwere ndị mmepe na-anwale ụdị egwuregwu ndị ọzọ.
Zọpụta Eddy ọchị bụ egwuregwu na-enweghị atụ ma dịkwa egwu na anyị nwere gam akporo na ọ bụrụ na ike gwụrụ gị na egwuregwu ndị a na-ahụkarị, enwere ike ị ga-ahụ ya n'anya ma ọ bụ wepu ya ipso facto. Ọ bụghị egwuregwu maka mmadụ niile, yabụ na-adọla gị aka ná ntị.
Ihe mgbagwoju anya iji ghota ya nile, ma o na-enye ya obi uto ya ka o nye ya nkeji oge ya ma jiri ya kpọrọ ihe.
Usoro edemede: 6,2
N’anya o nwere nke ahụ ma bụrụ obere pụrụ iche
Enwere ike ghara ịkọwa ya nke ọma na nkuzi ya yana igwe ya siri ike nghọta
Chekwaa Eddy ọchị
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Zoputa Eddy na ndi enyi ya site na Rory mischie na Save Eddy Smile
Etu esi nwalee ogo nke oku vidiyo tupu ịme ya